Redmi ရဲ့ ပထမဆုံး Gaming Phone ကိုတွေ့လာရတော့မှာလား? — Anycall Mobile
Redmi ရဲ့ ပထမဆုံး Gaming Phone ကိုတွေ့လာရတော့မှာလား?
By liam January 21, 2021 1 Min Read
လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာ Budget ဖုန်းလို့ဆိုလိုက်ရင် စာဖတ်သူအားလုံး Redmi ကိုပဲပြေးမြင်ကြမှာပါ။ Redmi ဟာဆိုရင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Budget ဖုန်းတွေသာမကပဲ Flagship Killer လို့နာမည်ကြီးတဲ့ K30 Ultra လိုမျိုး Mid-range ဖုန်းတွေကိုပါထုတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလို Budget ဈေးကွက်ရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့အတူ မကြာခင်မှာ Redmi ရဲ့ ခြေလှမ်းအသစ်ကိုတွေ့လာရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Redmi ရဲ့အထွေထွေ မန်နေဂျာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Lu Weibing ရဲ့ Weibo က Post တစ်ခုအရ Redmi အနေနဲ့ ဒီနှစ်အတွင်းမှာ Gaming Smartphone တစ်လုံးကိုမိတ်ဆက်လာဖို့စီစဉ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ Redmi ရဲ့ နောက်ထပ်ဦးတည်နေတဲ့ခြေလှမ်းဟာ Gaming Phone ဖြစ်လာတော့မှာပါ။
Lu Weibing ရဲ့အဆိုအရ Redmi Gaming ဖုန်းမှာ MediaTek ရဲ့ Chipset အသစ်ဖြစ်တဲ့ Dimensity 1200 Chipset နဲ့အားဖြည့်ပေးလာမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီ Dimensity 1200 Chipset ဟာဆိုရင်CPU Clock Speed မှာ 3.0GHz အထိ‌တင်ပေးနိုင်တဲ့ Chipset တစ်ခုဖြစ်တာမို့လို့ ဖုန်းမှာ လုံး၀အကြမ်းဆုံးဆိုတဲ့ Gaming Performance ရလာဖို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။
နောက်ထပ် Lu Weibing ရဲ့အဆိုအရ Redmi ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ဒီ Redmi Gaming ဖုန်းဟာလည်း ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ထွက်လာမယ်လို့ သိထားရပါတယ်။
ဆက်စပ်သတင်းအနေနဲ့ လာမယ့် February လမှာ Redmi ရဲ့နာမည်ကြီး K Series ထဲက K40 Series ကိုတွေ့လာရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ K40 Series ထဲမှာဆိုရင် K40 နဲ့ K40 Pro ဆိုပြီး Model နှစ်မျိုးပါလာမှာပါ။ Specs တွေအနေနဲ့ K40 မှာဆိုရင် Flagship လည်းမကျ ၊ Mid-range လည်းမကတဲ့ Dimensity 1000+ Chipset နဲ့အားဖြည့်ပေးလာဖို့ရှိနေပြီး K40 Pro မှာ တော့ Flagship Chipset အသစ်ဖြစ်တဲ့ Snapdragon 888 Chipset နဲ့ထွက်လာမယ်လို့သိထားရပါတယ်။ ဒီ K40 series ရဲ့ဈေးဟာဆိုရင် မြန်မာငွေ ‌၆ သိန်းခွဲလောက်ကနေ စလာမယ်လို့သိရပါတယ်။
ပရိတ်သတ်တွေထဲမှာရော Redmi ရဲ့ Gaming Phone ကို မျှော်နေမယ့်သူ ဘယ်သူတွေများ ရှိနေမလဲ?